Umsebenzi weZello-iiRadiyo zenethiwekhi
Ikhaya / Umsebenzi weZello
Udidi: Umsebenzi weZello
ezaposwa ngomhla Ngamana 29, 2018
Anysecu 3G-W2 uphononongo lokuqala lwevidiyo
Ewe iyasebenza noZello! Ewe iyasebenza neQela eliThetha i-3 (IRN), Ewe unokukhuphela usetyenziso kwiGoogle Play.
Ewe, eyona ilungileyo kukubukela ividiyo kwaye uzibonele ngokwakho ukuba unomathotholo ubukeka njani!
Kwaye ulungele ukumangaliswa! Kuyamangalisa okuncinci! Ngaba uyafuna enye yakho? Myalelo apha!